Jurgen Klopp Oo Ka Hadlay Ka Tagista Shaqada Kooxda Liverpool Iyo In Uu Nasiino Sameeyo
Home Horyaalka Ingiriiska Jurgen Klopp oo ka hadlay ka tagista Shaqada Kooxda Liverpool iyo in...
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa meesha ka saaray soo jeedintii ahayd inuu u baahan yahay nasasho xilli hoos u dhac uu ku yimid natiijooyinka kooxda heysata Premier League oo ku soo aaday xilli adag noloshiisa gaarka ah taasi oo macalinka sheegay in uusan u baahneyn.
Reds ayaa isku dayi doonta inay xirto seddex guuldaro oo isku xigta oo horyaalka ah taasoo u horseeday Klopp inuu qirto in difaacooda horyaalka uu dhamaaday markii ay dib u bilaabayaan ololahooda Champions League ee ay RB Leipzig kula ciyaarayaan Budapest.
Boor lagu muujinayo taageerada Klopp, oo awoodi waayey inuu ka qayb galo aaska hooyadiis Elisabeth toddobaadkii hore sababo la xidhiidha xaddidaadda safarka coronavirus, ayaa laga taagay meel ka baxsan Anfield inkasta oo Jarmalku ku adkaysanayo inaan loo baahnayn.
Klopp ayaa markaa siiyay sheeko gaaban sheekada la xiriirta inuu diyaar u yahay inuu qaato nasasho ama xitaa inuu ka tago shaqadii uu qabtay bishii Oktoobar 2015 isagoo ku adkeystay inuu aqbalayo caqabada ah kooxda Liverpool.
Waxa ugu dambeeya ee aan doonayo inaan sameeyo waa inaan kaga hadlo waxyaabaha gaarka ah shir jaraa’id laakiin qof walba wuu ogyahay inaan soo marnay waqti adag, mar walbana waxaan ula macaamilnaa qoys ahaan boqolkiiba 100.
Previous articleSupercomputer oo Saadaaliyay Kooxda ku guuleysan karta Horyaalka Premier League
Next articleChelsea oo ka badisay Newcastle United soona gashay Kaalinta Afaraad ee Horyaalka